Nhau - Vhidhiyo muBhurocha - Chishandiso Chinoshamisa Chekukurumidza Kushambadzira Uri kutsvaga chishandiso chakashambadza chekushambadza chinobatanidza vhidhiyo nekudhinda kushambadzira bhizinesi rako nekukurumidza?
Vhidhiyo muBhurocha - Chishandiso Chinoshamisa Chekukurumidza Kushambadzira Uri kutsvaga chishandiso chakashambadza chekubatanidza icho chinobatanidza vhidhiyo nekudhinda kushambadzira bhizinesi rako nekukurumidza?
Bhurocha revhidhiyo richakubatsira kuita chirongwa chakadai nenzira inoshanda. Inoita rondedzero yakapfupika uye chaiyo yechigadzirwa chako, sevhisi, kana kambani muzvinhu zviviri - vhidhiyo nekudhinda. Iwo akajairwa mapepa anodhinda kusimudzira kukwidziridzwa kwako, kana kutozviita muchikamu che'kushambadzira magazini '. Kugadzira kushambadzira zano rakafanotarisirwa kunogona kutungamira mukufunga kwakashata kwechiratidzo chako.
Pre-kugadzirwa kweye yakanaka bhizinesi vhidhiyo
1. Shanyira youtube uye tsvaga mazwi akakosha muindastiri yako kune kumwe kufemerwa kana kujekeswa kwemaitiro ekugadzira yakanakisa firimu mune yako indasitiri.
2. Nyora mabhizimusi ako simba uye / kana mbiru yemhando uye uve wakajeka pane izvo mabhenefiti aunopa mutengi uye kuti unosiyana sei nemakwikwi ako.
3. Funga nezve izvo zvinoonekwa kana vanhu vanogona kunyatsotaura nyaya yako. Ndiwe here kana vatengi vako kana vanopa? Zvibvunze pachako, ndingaunza sei nyaya yedu kuhupenyu mune faira fomati?
4. Hira mugadziri wefirimu kana director director ane folio rakakura rebasa uyo anogona kukuudza izvo zvinoguma mumafirimu avo zvinogadzira. Iwe unowana ekumusoro-magumo ejensi ayo anogona kugadzira cinematic masterpieces kana vadzidzi vefirimu kutanga uye mabhajeti avo achasiyana zvakanyanya. Kugadzira firimu hunyanzvi hunotora nguva yakareba uye kuyedza kuti uve nyanzvi, saka ive shuwa yekuhaya vanhu vari nyanzvi pabasa ravo, nekuti vanozoita kuti utaridzike. Nepo paine makambani akabudirira kugadzira zvirinyore paPhones, ivo vanogona kunge vakavaka brand equity vasati vagovana zvisvinu zvemukati.
5.Kurukura nevagadziri vemafirimu pane akanakisa mafomati kuti utaure nyaya yako. Icho chinyorwa chenguva-firimu rondedzero, zvinyorwa zvemavara, vox pop, art imba kana akateedzana ezvipupuriro? Ose mafirimu makuru anosanganisira kugadzirira kwakanaka.
6. Jekesa kuti unoda kuti muoni anzwe sei mushure mekuona firimu rako uye kana paine kudanwa kwekuita? Sarudza kuti firimu rako rinozogoverwa kupi - youtube, webhusaiti yekambani, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter - sezvo izvi zvinogona kukanganisa maitiro aunoita firimu yako?
7. Enda kumafirimu kuti uone kuti firimu iri pane meseji uye chaizvo zvawanga uchifunga nekuti unenge uchiziva zita rako zvirinani kupfuura chero munhu.
8. Bvunza nezve mupepeti mupepeti sezvo gadziriso inongoitwa nyore kana kuronga kwakanaka uye kutora mifananidzo kwapera. Ita shuwa kuti chibvumirano chinoti iwe unogona kugadzira zvakakurudzirwa editions kune akapedza shanduro.